Iindaba - IINGCEBISO EZULULA ZOKUHOMBISA IKHAYA LAKHO NGENKANI NE-IRON ART
IINGCEBISO EZULULA ZOKUHOMBISA IKHAYA LAKHO NGENKANI NE-IRON ART
Namhlanje kweli nqaku, ndingathanda ukwabelana nabahlobo ngezinye iingcebiso zokuhombisa ikhaya lakho ngendlela ekhethekileyo. Ezi ndlela zokuhombisa ezili-13 zilula kakhulu kwaye zisekelwe ikakhulu kubugcisa bomthi kunye nobugcisa bentsimbi ukwenza umtsalane kunye nendawo entle yasekhaya.
▲Usifaka njani isikrini seTV kunye nodonga lwangasemva?
Kwigumbi lokuhlala, unokwenza udonga olukhethekileyo "olwakhelwe ngaphakathi kweTV" ukwenza yonke indawo ibe mfutshane. Nje ukuba i-TV ifakwe eludongeni, inciphisa uthuli. Ngaphantsi kwesikrini sikamabonwakude, sebenzisa iinkuni kunye nentsimbi kwizinto zokuhombisa ukugqiba yonke indawo yokuhlala ejikeleze isikrini sikamabonwakude.
▲ Iifestile kunye neekhethini
Indawo enkulu yeefestile zeglasi iqinisekisa ukukhanya kwangaphakathi. Khetha amakhethini aphindwe kabini ukwenza igumbi lokuhlala libengezele ngakumbi.
▲Isitendi seTV yeenkuni
Nje ukuba isikrini sikamabonakude sifakwe eludongeni, sebenzisa iplanga leTV njengeshelufu. Unokugcina ezinye izinto kuwo kwaye uphephe ukuzibeka phantsi; kuya kuba lula ngakumbi ukucoca umgangatho wegumbi lokuhlala.
▲ Indawo yeplanga yeTV enedrowa kunye neeshelufu
Zihombise iishelufu zentsimbi kunye needrowa ngombala omnyama. Zihombise ngomculo wesitayile sakudala ezifana neerekhoda ezindala, iikhasethi, njl.njl., kwaye unokuphumla kwaye ukonwabele umculo ekhaya ngexesha lakho lesimahla.
▲ Ifenitshala yegumbi lokuhlala
Khetha i-sofa enkulu yesikhumba emnyama kunye noyilo olulula. Le fenitshala kufuneka yenziwe ngamaplanga kunye nobugcisa bentsimbi ukuze ilingane nendawo yonke yegumbi lokuhlala.
▲Ithala leencwadi laseKhaya eliNcinci
Beka ishelufu yeencwadi eyenziwe ngomthi nentsimbi kwikona yegumbi lokuhlala uze ubeke isibane sentsimbi ecaleni kwayo ukuze ujabulele ukufunda ekhaya ngamaxesha athile.
▲ Umbala wekhaphethi
Khetha ikhaphethi yamanani ejiyometri emnyama namhlophe. Yongeza itafile yekofu ekhandiweyo kunye noyilo olungenanto kunye netafile esecaleni yeplanga ecaleni kwesofa kwaye ubeke imihombiso oyithandayo kuyo ukuze ufumane ubutyebi kunye nobunewunewu bokuhombisa.
▲Ipaseji phakathi kwegumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala
Sukuncamathisela izinto ezininzi ezilahlekileyo kodwa ushiye indlela ephakathi kwegumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala ukuze wenze indawo yonke ibe banzi.
▲Ikhabhathi yewayini kwigumbi lokutyela
Yonga indawo kwaye ulungelelanise amacala omabini naphantsi kwefestile njengekhabhathi yewayini esecaleni yokugcina nokubonisa iibhotile zewayini zaseYurophu ezinencasa.
▲Itafile yokutyela yemabhile
Khetha itafile ejikelezayo yebhastile enesangqa ephindwe kabini ihambelana neendlela ezimbini ezahlukeneyo zeetafile zokutya kunye nezihlalo, kwaye umzobo wokuhombisa uxhonywe kuyo, into elula kwaye yothando. (UmLungu akanalo olu hlobo lwetafile)
Sebenzisa isitayela esilula sefenitshala yaseScandinavia. Faka ibhedi yokhuni kunye neecushion zebhedi, emva kwayo i-emerald-colored the background; phezu kwebhedi, sheets fresh yellow kunye pillows ugqibezela yonke charm lokulala eyilwe ngokugqibeleleyo.
Xhobisa igumbi labantwana ngeentlobo ngeentlobo zeethoyi ezithandekayo zamantombazana, iibhokisi zokunxiba, ikhathuni yosapho olulolwakho, kunye nezitulo ze-bow-tie. Yandisa ukusetyenziswa kwendawo yegumbi labantwana bakho ngokudibanisa idesika+yewadilophu+ uyilo lwetatami eludongeni olupeyintwe ngombala opinki.
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngebhafu emhlophe. Sebenzisa iglasi njengokwahlula phakathi kwendawo emanzi (ishawa kunye nebhafu) kunye nendawo eyomileyo yesitulo sendlu yangasese. Dibanisa iileyile zomgangatho omnyama nomhlophe kunye neendonga ezimhlophe nezimnyama ukwenza i-bathrobe elula kunye nesitayela.
Ixesha lokuposa: Nov-11-2020
ilanteni yokuhombisa, isibane esikhokeleyo, UbuGcisa beGadi banamhlanje, Metal Garden Decoration, izibane zelanga, Garden Decor Metal,